Milatariga Turkiga oo duqeymo ka fuliyay gobolka Idlib - Bandhiga Media
Milatariga turkiga ayaa bilaabay in ay duqeeyaan goobaha ay ku sugan yihiin militariga Siiriya iyagoo ka jawaabaya duqeymaha ay ciidamada Siiriya ay ka geysanayaan gobolka Idlib, waa sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Anadolu.
Warkaan waxaa lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay maamulka Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ka dib shir deg deg ah oo ka dhacay Ankara.
“Annaga oo kaashaneyna millatarigayaga, weerarrada cirka iyo dhulka ayaa lagu qaaday goobaha ay ku sugan yihiin taliska Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad, waana sii wadeynaa inaan sii wadno duqeynta,” ayuu yiri maamulku. Waxay sidoo kale ugu yeereen kaqeybgalayaasha shirkii Astana iyo bulshada caalamka oo dhan “inay joojiyaan dambiyada ka dhanka ah aadanaha.”
Kani waa weerar lagu qaaday kolonyo Turki ah oo ku sugnaa gobolka Jebel al-Zawiya, kaas oo la soo sheegay maalin ka hor, bishii Feebaraayo 27.
Gudoomiyaha Gobolka Hatay Rahmi Dogan ayaa markii dambe sheegay in ugu yaraan 22 askari looga dilay duqeynta. Sida laga soo xigtay ilo kale, halka ilo lagu kolsoonaan karo ay sheegayaan in ugu yaraan 30 askari oo Turki ah ayaa la diley.
Weerarkii ka dhacay Bishii Janaayo iyo Febraayo, ciidamada Suuriya waxay qabsadeen ku dhawaad ​​kalabar aaggaga u dhow gobolka Idlib. Tani waxay ka careysiisay xukuumada Ankara, isagoo sheegay Erdogan in haddii dhamaadka bisha Febraayo ciidamada Suuriya ay ka bixi waayaan goobaha ay hadda ku sugan yihiin, in ciidamada Turkiga ay bilaabi doonaan hawlgal militari.
Ruushka, oo taageeraya xukuumada Dimishiq, waxa uu isku dayayaa in xaaladda lagu xaliyo wadahadal, laakiin dhinacyadu wali ma aysan heshiin.
Dagaalka ka socda gobolka Idlib ayaa sii xoogeystay kadib markii Bishii 1aad ee Sanadkaan uu dagaalo xoogan dhex maray milatariga Siiriya iyo kuwa falaagada oo uu hogaaminayo Turkiga.